अस्टाना नेशनलमा यसको नाममा एमेन कर्नर
किन 'एमेन कर्नर' भनिएको छ, र कसले नामको साथको नाम लिन्छ?
यहाँ छ अगस्तमा राष्ट्रिय गोल्फ क्लबमा एमेन कर्नरले यसको नाम पायो
एमेन कर्नर अगस्टाना नेशनल गोल्फ क्लबको एक प्रसिद्ध भाग हो। तर यो किन भनिन्छ, र कसले नामको साथ आयो? मूल कथामा हॉल अफ फेम स्पोर्ट लेखक, अजलोल्ड पामर, ज्याज संगीतकारहरू र सडक-कोने प्रचारकहरू समावेश छन्।
1958 मा परास्नातकहरूले 'एमेन कर्नर' नामकरण गरे
1958 मा परास्नातक पछि "एलेन कोर्नर" खेल इथ्रिटेटेड मा एक लेख मा लेखक हर्बर्ट वारेन पवन द्वारा अनुकरण गरे ।
त्यो परास्नातक थियो जहाँ अर्नोल्ड पाल्मर ले एक सत्तारूढ सहयोग संग उनको पहिलो प्रमुख च्याम्पियनशिप अर्जित गरे कि दशकहरु पछि, केन वेंटिरी अझै पनि चुनौतीपूर्ण थियो।
पवनले शानदार तरिकाले 11, 12 र 13 प्वाइन्टमा "एमेन कोर्नर" लाई दिएको छ, जसले पामरले 1958 टूर्नामेंटको अन्तिम दिनमा छेद खेले।
कसरी पामरले पवनको 'एमेन कर्नर' प्रयोग गरे
एक आइतवार बिहान साँझको रात पछि, टूर्नामेंटले एम्बेडेड बलहरू समापन गर्न अन्तिम गोलको लागि स्थानीय नियम अपनाए। एक गोल्फर जसको बल एम्बेडेड सक्छ, नयाँ स्वीकृत नियम अन्तर्गत, यो बिना सजाई लिनुहोस् र ड्रप गर्नुहोस्।
र तपाईं यसलाई थाहा छैन, त्यो नियम अन्तिम राउन्डको समयमा, र नेताहरूको एक सम्बन्धमा। नं। 12 मा, पामरको बलले हराएको छ र यसको पछि बैंकमा सम्मिलित। तर छेदमा आधिकारिक स्थानीय नियमको बारेमा भ्रष्ट थियो, र पामरलाई बोलाउन को लागी उसले झुट बोल्न थाल्छ।
यसैले पामरले बललाई आफ्नो एम्बेडेड पोष्टबाट हटाइदिए र दुई-बोगी5रन बनायो।
त्यसपछि, आधिकारिक शासनको विवादमा, उसले मूल एम्बेडेड पद नजिकैको दोस्रो बललाई पराजित गर्यो र दोस्रो बलको साथ3रन बनायो। वेंटिरीले सधैँ दावी गरे कि पामरले बलमा आफ्नो ब्याट्री दोस्रो बल बटुल्न सक्नु अघि घोषणा गर्न सकेन। पामरले सधैं दावी गरे कि उनले यो इरादा घोषणा गरे।
यद्यपि, मास्टर्स वेबसाइट सम्बन्धित, पामर र विएन्टुरीले खेल खेल्दै गर्दा नियम समितिले परिस्थितिलाई सोधे:
"समितिले निर्णय गरेको थियो कि स्थानीय नियम लागू भयो र यदि हां भने, कुन अंक गणना गर्नु पर्छ। नम्बर 13 मा, अझै पनि उनको स्कोर 12 मा भएको निश्चित छ, पामरले एक एगल को लागि 18 फुट राख्दथे। 3. जब खेलकुद नम्बर 15 को खेलमा, पामरलाई 12 ले आफ्नो ड्रप सही थियो र छेदमा उनको स्कोर3थियो, उनको पहिलो ठूलो विजयको लागि नेतृत्व। "
हावाको स्पोर्ट्स इल्लेस्ट्रेटेड आर्टिकल
पवनको स्पोर्ट्स इस्ट्र्रिटेटेड लेख टूर्नामेंट को वर्णन गर्दै, र गोल्फ कोर्स को त्यो भाग मा घटनाहरु लाई यस तरिका देखि शुरू हुन्छ:
"भर्खरै परास्नातक गोल्फ टूर्नामेंटको सुरुवात अघि दिउँसो अस्टेन कर्नरमा अस्टस्ता नेशनल कोर्सको सबैभन्दा टाढाको पहुँचमा एउटा अचम्मको उत्सव समारोह भएको थियो जुन राईको क्रीकले नजिकैको 13 औं फेरी नजिकै पुग्छ, त्यसपछि अगाडि समता गर्दछ। छोटो 12 ​​औं सम्म हरियो को किनारा र अन्ततः 11 औं हरियो को साथ घुमाउछ। "
र कहिलेकाहीँ, गोल्फर्स र गोल्फ फ्यानहरूले अष्टे नेशनलको 11 औं, 12 औं र 13 औं प्वालहरू "एमेन कर्नर" भनिन्छ। (वास्तवमा, पवनले 11 औं हरीमा शटको रूपमा एमेन कर्नर परिभाषित गरेको छ, पूर्ण 12 औं छेद, र टी मा संख्या
13, तर बढी समय 11, 12 र 13 को पूर्ण तीन-प्वाल खिच्ने नामको नाममा आउँदछ।)
हावा पछि बताइएको छ कि त्यो कसरी 'एमेन कोर्नर'
तर त्यसोभए पवन त्यो नाउँ कसरी आयो? उनको प्रेरणा कस्तो थियो? 1988 मा प्वाइल गोल्फ डाइजेस्टका लागि एक व्याख्या लेखे। त्यस लेखमा, पवनले यस्तो लेखे:
"लेख विचार गर्न धेरै समय संग, मलाई लाग्थ्यो कि म केहि उचित नाम को साथ को पाठ्यक्रम को कुंड को लागि जहां महत्वपूर्ण कार्रवाई भएको थियो को लागि आना प्रयास गर्न को लागि ... 'कुना' शब्द संग एकमात्र वाक्यांश मैले (फुटबलको 'ताफिन कोने' र बेसबलको 'हट कोने' को बारेमा सोच्न सक्दछ)) एक पुरानो ब्लुबर्ड रेकर्डमा एक गीतको शीर्षक थियो। "
पवनको दिमागमा गीत गाउ "अमीन कर्नरमा" शाउटन "भनिन्छ" र त्यसैले "एमेन कर्नर" वाक्यांशको मोटो हो जुन अगस्टको नेशनलको अंश वर्णन गरिएको थियो।
र त्यस जैज गीतको लेखकले कसरी "एमेन कोर्न" सँगै लेखे? त्यो न्यूयर्क शहरमा ठेगानामा जान्छ। 1 9औं / प्रारम्भिक 20 शताब्दीको अन्तमा, न्यूयर्कको स्थानमा बाइबिलहरू धेरै मात्रामा प्रिन्ट गरियो। एउटी क्षेत्रको वरिपरि प्रचारकहरू सायद बाहिर जान्छन् (यसैले गीतको शीर्षक) पापको विरुद्ध मुक्ति र सल्लाहहरूको कथाहरू।
पाठक क्रिस जेनकिन्सको रूपमा, जसले पहिले हामीलाई यो मूल कथालाई संकेत गरे, "राखेर धेरै धेरै थिए अनीन!" प्रत्येक दिन सुनेको छ कि शब्द 'एमेन कर्नर' विकसित भयो। नोट: हाम्रो परिवार बाइबल, जुन वर्षको लागि परिवारमा भएको छ, स्पष्ट रूपमा बाइबल निर्माताको ठेगाना स्पष्ट रूपमा ... न्यू यॉर्क शहर।
अन्य एेन कोर्नहरू
"अनुहार कोने" को एक आधुनिक, स्लैंग उपयोग को समयमा विकसित भएको छ: शब्द "हा हा हा"। त्यसोभए "मालिक हाँ हरूको गुच्छामा घिमिरे हुन्छ" हुन्छ "मालिकले आन्दो कुना घेरिएको छ।"
1960 को दशकको मध्यमा, वेल्समा साथीहरूको समूहले चट्टान ब्यान्डको निर्माण गर्यो र अमान कोर्न नाउँ गरे। समूहमा यूकेमा केही साना हिटहरू थिए। यसको बक्समा विकिपीडियाको पृष्ठको अनुसार, यो नाम अस्टाना नेशनलबाट होइन तर स्थानीय क्लबबाट जसले एमेन कर्नर भनिन्छ। त्यो क्लब लगभग निश्चित रूपमा जाज रेकर्ड वा स्ट्रीट कुना प्रचारकहरूबाट यसको नाम लिईयो - मास्टर्सले अहिलेसम्म गोल्फ सन्दर्भको बाहिरको पप संस्कृतिलाई बिर्सने गरेको थिएन।
आज, यद्यपि, कुनैपनि समयमा तपाईं एक बार वा रेस्टुरेन्ट वा अरुण कुना नामको अन्य स्थानमा चलाउनुहुन्छ, खासगरी यदि यो गोल्फ कोर्स नजिकै छ भने, नाम शायद अगस्टाना नेशनल, 11 औं, 12 औं र 13 औं छेद द्वारा प्रेरित थियो।
ब्रिटिश देवियों एमेच्योर च्याम्पियनशिप विजेता
1930 ब्रिटिश ओपन: जोन्स ग्रैंड स्लैम साल
यूएस वरिष्ठ ओपन च्याम्पियनहरू
पीजीए टूरमा बनाइएको प्रायः लगातार कटौती
शीर्ष 8 उद्धरणहरू अमेरिका खुला ओख कति कति ठुलो छ
2016 यूएस ओपन साइटिस्चर योग्यता परिणामहरू
ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट को अन्तिम एमेच्योर विजेता को को थियो?
11 पीजीए टूर इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो फाइनल-गोल्ड आइब्याकहरू
मोटरसाइकल तारिङ हार्मेस बनाउने
रासायनिक प्रतिक्रिया के हो?
Sayonara संग कुराकानी कसरी गर्ने?
पहिले नै र अझै प्रयोग गर्नुहोस् अंग्रेजीमा
पृथ्वी साक्षी मुद्रा
6 तर तपाईले तरल कूलको बारेमा थाहा पाउनु हुन्छ 2014 हार्ले डेविडसन
जूलिया मोर्गन, जो महिला हिस्टस्ट क्यासल डिजाइन गरियो
अमीनो एसिड शेरता
क्रूसडाइज: म्यान्टगिसर्डको युद्ध
शिक्षकहरूको लागि शीर्ष प्रेरणा पुस्तकहरू
Seasonable र मौसमी
Permafrost के हो?
राष्ट्रिय9-11 स्मारकका लागि अर्डर डिजाइनको बारेमा
अंग्रेजी परिभाषा र उदाहरणमा व्याकरण
के यो ठुलो पानीले ठुलो भन्दा छिटो निलो छ?
रासायनिक संरचना मानव सेतो वा पर्दा के हो?
भौतिक संरचनाहरूको तालिका